ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: E Book
ညချစ်သူ | 11:01 AM | Be the first to comment!
ညချစ်သူ | 11:01 AM |
မြန်မာ E Book များ
မင်းခိုက်စိုးစန် - မနက်ဖြန်အစီအစဉ်
မင်းခိုက်စိုးစန် - ချောင်းကြည်တတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ည
မင်းခိုက်စိုးစန်- စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - တပြည်သူမရွှေထား
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးညအိပ်မက်မြူ
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးတွေရွာမှဖြင့်လျှင်ကွယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မျက်ရည်လောကများ၏ဟိုမှာဘက်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ရှားလော့ဒေဝီနှင့် ဘာသာပြန်ကဗျာများ
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်း
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်းတေးမဆုံးစေနှင့်စောသခင်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - သူ့ ကျွန်မခံပြီ
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည်ခိုင်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - အိုင်ကျူ မည်မျှပုံ၍ယုံရမည်နည်း
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ဤမြေမှသည်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မောင့်ဘဝညအလားကွယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မြေခရွက်ဝါ ဝတ္ထုတို
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နွေကန္တာဦး
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့်
မြန်မာ စာချစ်သူများအတွက် မြန်မာစာအုပ်များ
ဉာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
သိပ္ပံမှသည် သစ္စာဆီသို့ (ချစ်ငယ်)
ဇော်ဂျီ _ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀...
ဘုရားသားတော် _ သာသနာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှင့် ဝိနည်းဓိုရ်ဖန်တီးရေးဥပ...
မြန်န်မာသမားတော်ကြီးများ _ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ , သုဓမ္မာပုံန...
ရန်အောင်မောင်မောင် _ ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံ ,သီရိမေရောင်စုံပုံနှိပ်တ...
၀င်းတင့်ထွန်း _ ခြောက်တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာခံဖူးသလား နှင့်အခြားထောင...
သင်္ဃဇာဆရာတော် _ ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် ...
အရှင်ရဋ္ဌသာရ _ ဂမ္ဘီသာရပျို့ စာကိုယ် , မြန်မာ့ယူနီယန်စာပုံနှိပ်တိုက် ,...
အရှင်သီဟာဘိဝံသ _ မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း , ပြည်ကြီးမန်တိုင်စာပုံနှိပ်...
အရှင်အဂ္ဂသမာဓိ _ နေမိမ္ဃစိုးခဏ်းပျို့ , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက်,ရန်ကုန်,၁...
အောင်သင်း _ မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္ဓ၀င်မိတ်ဆက်, Future Publishing House...
အုတ်ဘိုဆရာတော် _ စွယ်တော်သျှောင်ရတု , ဟံသာဝတီသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက် ,...
ဦးရ၀ိန် _ ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် , ရန...
ဦးလှ _ ဗမာ့အရေးတော်ပုံ-ပတွဲ , မြန်မာ့သိပ္ပံစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန...
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တု...
ဦးဣန္ဒောဘာသ _ ၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ, ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋက...
*Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf &...
P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-a comparative study, POON...
၀ိသာခါ နှင့် သီတာ – ချစ်ဦးညို
စာမရီသို့ထူးထူးခြားခြား – ချစ်ဦးညို
သမိုင်းမတွင်ပေမယ့်သမိုင်းဝင်နေတဲ့စကားများ – ချစ်ဦးညို
ချစ်သောပါဒဧကရီ – ချစ်ဦးညို
မြို့ပြသူပုန် မှတ်စုများ (ခင်မမမျိုး)
ရက္ခအလင်းတန်း ဂျာနယ် အမှတ် (၁) ဧပြီ ၂၀၁၁
အရေးတော်ပုံဂျာနယ် (အတွဲ ၁ – အမှတ် ၄၊ ဧပြီလ – ၂၀၁၁)
အိုးဝေဂျာနယ် အမှတ် (၈) ၃၁-၃-၂၀၁၁
ရာဇာဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း – နိုင်ပန်းလှ
ကျွန်ုပ်နှင့်မိုက်ကယ်ကောလင်း – ဆရာဟိန်
မင်းလှခံတပ် – တာမွေ အထက- ၂ -စာပေနှင့်အသိဥာဏ်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့
ရွှေမန်းနှစ်တရာ – စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း
ရှမ်းပြည်၏အမှားတော်ပုံ – ခွန်ကြည်
အရေးတော်ပုံကြီး – ဦးသိန်းမောင်
နေသူရိန်မှတ်တမ်း – သံတော်နှင့်ဇွဲ
မြန်မာရာဇ၀င်ချုပ် – ဆရာလွန်း
ကရင်ရာဇ၀င် – ဦးပညာ
ဂျာမဏီအတွင်းရေး – ဦးဘခိုင်
တနင်္သာရီတိုင်း-မြိတ်ရာဇ၀င် – ဦးကြီးစိန်
ရှမ်းတို့ရဲ့တကယ့်ဖြစ်ခဲ့ပုံများ – စိုင်းစိန်ကတုံး
ကရင်နီပြည် – ဦးစိန်
ကုလား ဗမာတိုက်ပွဲ – မောင်သိန်းဖေ
တောင်ငူသမိုင်း – မောင်ဘွား
သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ – ဦးဖိုးကျား
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း – ခင်ကျော်ဟန်
ဗုဒ္ဓဘာသာအနုပညာနိဒါန်း – တိုက်စိုး
ရတနာပုံမှ ရတနာဂီရီသို့ – အောင်ဇေ
တလိုင်းဝေါဟာရသုတေသနစာတမ်း-အပိုင်း- ၁ – နိုင်ဖေသိန်းဇြာ
ရာဇ၀င်တွင်ရစ်မယ့်စကားဝိုင်းများ – ကျော်ဝင်း
နန်းတွင်းသူခိုးနှင့်မိန်းမစိုး – ရွှေဘိုမိမိကြီး
စုဖုရားလတ်ရှင်းတမ်းနှင့်ပါတော်မူဖြစ်ရပ်များ – ကောင်းထက်
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်များလေ့လာတွေ့ရှိချက် – ဒေါ်ခင်သိန်း-မြန်...
ထီးရနံ့ နန်းရနံ့ – မောင်သန်းဆွေ
ပါးစပ်ရာဇ၀င် – မှော်ဘီဆရာသိန်းကြီး
မြန်မာအနုပညာလက်ရာပစ္စည်း – ဒေါက်တာသန်းထွန်း
မြန်မာမြို့ဟောင်းတကောင်းရုပ်ပုံလွှာ – ချစ်စံဝင်း
မြန်မာအစ အထောက်အထားလေ့လာချက်စာတမ်း – ချစ်စံဝင်း-လမင်းအိမ်
မြန်မာ့စောင်း – ရဲမြလွင်
ပန်းချီကဏ္ဍသစ် – ခင်မောင်
ရိုးရာမှသည်ခေတ်ဆီသို့ – ဗဂျီအောင်စိုး
စာမဲ့ကဗျာ – ဗဂျီအောင်စိုး
မှော်ရုံတောမှာမောလှပြီ – မြသန်းတင့်
ရှမ်းမြန်မာစာပဒေသာ – မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့
ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ – မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရဦးသိန်းဟန်
မြန်မာစလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း – မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန
ပြည်သူ့အတွက်မြန်မာစကားပြေ – မောင်ခင်ဖြူ-ဓနုဖြူ
၁၃၃၆ ခုနှစ်-မြန်မာနိုင်ငံစာဆိုတော်နေ့အခမ်းအနား – မြန်မာနိုင်ငံစာပေန...
ကျွန်တော်နှစ်သက်မိသောကဗျာများ – ဦးသန်းထွတ်
ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်မြန်မာစာနှင့်အရေးအသားပြဿနာများ – မောင်ခင်ဖြူ-ဓနုဖြူ
မြန်မာစာမြန်မာမှု – မင်းသုဝဏ်
စာပေသမိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေးအမြင်များ – မောင်ဇေယျာ
ကဗျာဆရာ၏ရိုးဖြောင့်မှု – ဒဂုန်တာရာ
စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ – မြသန်းတင့်
ကြာညိုနံ့သင်းသောရေ၀တီမ-ပထမအကြိမ် – မြသန်းတင့်
လမင်းကိုထရံပေါက်ကကြည့်ခြင်း – မြသန်းတင့်
မြန်မာ့မဟာဂီတ – လူထုဒေါ်အမာ
ဘ၀အောင်မြင်ရေးသို့ရှေးရှုကြ – ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် – ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
အကောင်းဆုံးဘ၀လမ်းညွှန်မှု – ဒေါက်မင်းတင်မွန်
ခန္ဒာ-၅ -ပါး ပျောက်ဆုံးခြင်း-တရား – ကိုစံ
ရောင်စုံရုပ်ပြပဌာန်း – ခင်မောင်အေး
ရဟန္တာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများပထမပိုင်း – ဌေးလှိုင်-တန်ဆောင်တိုင်
စိန်ရောင်ခြည်စေတီတော်ကြီး၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ – ဥုးအရိယ၀ံသ-အရှင်
ပေါင်းတည်သမိုင်းနှင့်မြတ်စွယ်တော်အတ္ထုပ္ပတ္တိ – ဦးထွန်းညွန့်
မြောက်ဦးမြို့ဘုရားသမိုင်း – ဦးသာထွန်း
မန္တလေးဘွဲ့မော်ကွန်း – ဦးပုည
မဟာသကျသီဟဘုရားသမိုင်း – လယ်တီ-ဦးလှပိုင်
ကျိုက်မှော်ဝန်းရေလယ်စေတီတော်သမိုင်း – က၀ိဓဇဘွဲ့ခံ-ဦးကျော်
ကျိုက်ကမာစိန်စေတီတော်သမိုင်း – ပညာဝံသသူမြတ်
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင် – ဦးချစ်ရွှေ
ကောင်းမှုတော်ဘုရားသမိုင်း – ဆရာဦးထွန်းကြည်
ဥပသကောဝါဒဋ္ဋီကား – သင်္ဃဇာဆရာတော်
ဖတ်ရန်- ဟယ်၇ီပေါ်တာ -ေ၇းသူ ကြည်ကြည်မာ